Plastic osisi oghere panel extrusion akara na -eji na -eme ka ụzọ panel, waffle mbadamba, n'uko panel.window osisi. ụlọ ịkpụzi osisi wdg
Ogwe ọkụ dị larịị, na-adịgide adịgide, nguzogide mmetụta, ihe na-egbochi uzuzu, mgbochi mmiri, ihe mgbochi mmiri, mgbochi ịka nká, anaghị egbu egbu na kemịkalụ, dị ọnụ ahịa, ntụgharị dị mfe, imegharị 100%, ụdị agba dị iche iche ụlọ ọrụ.
Oghere oghere na -emetụta akụrụngwa, ngwa elektrọnik, igwe nkenke, nri, ọgwụ, uwe, akpụkpọ ụkwụ, nkwakọ ngwaahịa nzipu ozi, ụlọ ọrụ akụkụ akpaaka dịka nkwakọ ngwaahịa na njem. Enwere ike idobe ibu ngwaahịa nwere ezi uche dabere na nhazi nke ngwa.
Igbe ntụgharị nwere ike ịdị n'otu iji rụọ ọrụ nke ọma na ohere nke ụlọ mmepụta ihe ma ọ bụ ogige ibu, na -abawanye ikike nchekwa na njem, iji belata ụgwọ nrụpụta.
Ka ọ dị ugbu a, ngwugwu ihe nwere oghere oghere bụ usoro nkwakọ ngwaahịa. Ọtụtụ ụlọ ọrụ dị elu ejirila igbe ntụgharị oghere oghere dị ka nkwakọ ngwaahịa, nke nwere ọtụtụ uru pụrụ iche, dịka
1.Ihe dị arọ na ịchekwa ihe. Ogwe oghere plastik nwere njiri mara mma dị mma, ma e jiri ya tụnyere otu mmetụta ahụ, iji ogwe plastik oghere na -ebelata ihe oriri na ọnụ ahịa.
2. Okpomọkụ na mkpuchi. N'ihi nhazi oghere, ikpo ọkụ na mmetụta nnyefe ụda doro anya dị ala karịa nke bọọdụ siri ike.
3.Good n'ibu Njirimara. Ọdịdị pụrụ iche mere ka oghere oghere plastik nwee ọmarịcha igwe eji arụ ọrụ dịka ike siri ike, nguzogide mmetụta, ike mkpakọ dị elu, ihe na -awụ akpata oyi n'ahụ, nkwesi ike dị elu, arụmọrụ gbagọrọ agbagọ na ihe ndị ọzọ.
4 Nchedo gburugburu ebe obibi doro anya. Ogwe oghere plastik anaghị egbu egbu na enweghị mmetọ. Ngwọta mkpofu dị mfe ma ọ gaghị ebute mmetọ gburugburu ebe obibi. Enwekwara ike ijigharị ya iji mepụta ngwaahịa plastik ndị ọzọ.
5. Njirimara kemịkal kwụrụ chịm. Ogwe oghere plastik nwere ike bụrụ nke anaghị egbochi mmiri, mgbochi na-emebi emebi, na-egbochi ụmụ ahụhụ na enweghị fumigation. E jiri ya tụnyere kaadiboodu ọ nwere uru doro anya.
6. Anti-static, conductive na ire ọkụ retardant. Mgbe mgbanwe, agwakọta na ịgba mmiri dị n'elu, ogwe plastik nwere oghere nwere ike bụrụ ihe mgbochi, na-eduzi na ire ọkụ.
7. Ala dị larịị ma maa mma, agba zuru oke. N'ihi usoro ịkpụzi pụrụ iche nke oghere oghere plastik, enwere ike nweta agba ọ bụla site na ogbe ụcha agba, na elu ya dị larịị ma dịkwa mfe ibipụta.
Katapila traktọ mejupụtara rọba rọba nke nwere ike ichebe elu ire ụtọ nke ngwaahịa. Traktọ na ebe ịcha ihe nwere ihe mkpuchi iko iji hụ na nchekwa nke ndị na -arụ ọrụ.
Ịchụso ọsọ na ibelata ọsọ ngbanwe na -eme mmekọrịta.
Mbelata njikwa otu site na sistemụ mmemme Siemens PLC nke nwere ike ijikwa ogologo oge ịcha ya nke ọma.
Nke gara aga: Ịkwanyere, eyi, Pee osisi plastic profaịlụ mmepụta akara
Osote: Ịkwanyere Pipe Production Line
Osisi Plastic Extruder
Onye Wpc Extruder
Line mmepụta Wpc
Onye Wpc Extruder, Nweta Wpc, Line Wepụ profaịlụ Wpc, Pelletizer onye na -eme ihe nkiri, Na -akụpịa igwe ihe, Onye na -eri nri na -akwụ ọtọ,